Huawei Mate 9, nyocha: nyocha na echiche nke eze ọhụrụ nke phablets | Gam akporosis
Di na nwunye jisiri ike nweta niche mara mma nke ndị ọrụ nwere ekele maka njiri mara mma ya, nnukwu ihuenyo na nnwere onwe dị ukwuu. Anyị enyegoro gị mbụ anyị echiche mgbe nwale ọhụrụ so na emeputa omume, ugbu a anyị ewetara gị otu zuru ezu Huawei Mate 9 nyochaa, n'enweghị obi abụọ ọ bụla, ekwentị kachasị mma nke ndị Asia buru ibu mere.
Ma ọ bụ na ọdịda nke Samsung Galaxy Note 7 enyewo ọlaedo ohere ya ndị asọmpi dịkwuo ha ahịa òkè na a mpaghara, na nke phablets, n'ụzọ doro anya na-achịkwa ndị Samsung Cheta ezinụlọ. Ọ bụrụ na, Huawei Mate 9 nwere ọtụtụ ọnụọgụ iji bụrụ eze ọhụrụ nke nso.
1 The Huawei Mate 9 na-anọchi anya maka ịnye ọhụụ dị egwu n'ime atụmatụ nke na-echekwa DNA nke onye nrụpụta
2 Njirimara teknụzụ nke Huawei Mate 9
3 Igwe ihuenyo zuru ezu nke HD nke na-enwupụta na ìhè ya
4 Onye na-agụ akara mkpịsị aka kacha mma na ahịa
5 EMUI 5.0, ihu igwe dị mma na nke na-adịghị akwụsịlata ahụmịhe onye ọrụ
6 Batrị: Huawei Mate 9 na-ehichapụkwa ndị na-asọmpi ya site na ịnye arụmọrụ na-enweghị atụ na nnwere onwe
7 Igwefoto nke gosipụtara sistemụ abụọ bụ ụzọ ị ga-esi
8 Osisi foto nke ejiri igwefoto Huawei Mate 9
11 Foto ihe osise nke Huawei Mate 9
The Huawei Mate 9 na-anọchi anya maka ịnye ọhụụ dị egwu n'ime atụmatụ nke na-echekwa DNA nke onye nrụpụta
Ihe mbụ ị tụrụ anya mgbe ị na-eji ekwentị 5.9 nke anụ ọhịa bụ na ọnụ ọnụ ya bụ oke na nha. Na nke a na - abịakwute ihe ịtụnanya mbụ mgbe ị na - anwale nke ọma di na nwunye nke Huawei 9. Ndị otu kachasị ọhụrụ na ndị phablet ezinụlọ nke onye nrụpụta Asia O nwere otutu akụkụ.
Na nha nke X x 156,9 78,9 7.9 mm Enwere m ike ịsị na Huawei Mate 9 bụ ezigbo ọnụ ma nwee ntụsara ahụ iji rụọ ọrụ n'agbanyeghị nsogbu nke ihuenyo ya. Ekwentị na-adị ezigbo mma na aka, na-enye ezigbo njide n’agbanyeghi nchacha ọla nke ejiri wuo ya na ya 190 gram nke ibu -eme ka ọnụ ya bụ ezigbo ìhè n'agbanyeghị na ha nwere a 5.9-anụ ọhịa panel.
Imirikiti uru nke nha ya na-aga n'ihu ekwentị ahụ, ejiri ya nke ọma. A na-ahụkarị okpokolo agba n'akụkụ n'ihu, karịsịa na ụdị Mocha Brown. Na mgbakwunye, onye nrụpụta na-eji obere okike nke dị naanị otu milimita gbara gburugburu ihuenyo niile na-enye nnukwu echiche nke iji n'ihu. Ọ bụ ezie na enwere ndị ọrụ na-anaghị amasị usoro a nke ukwuu, echeghị m maka ya ma ọlị. N'ezie, na ihe nlereanya m jiri, nke ihu ya na-acha ọcha, mmetụta ya dị ịrịba ama karị.
Ma okpokolo agba na nke ala abụghị oke obosara. Na akụkụ elu bụ ebe ọtụtụ ihe mmetụta dị na mgbakwunye na igwefoto dị n'ihu, ebe n'akụkụ ala anyị ga-ahụ logo nke ika ahụ. Na bọtịnụ capacitive? Huawei na-aga n'ihu ịkụ nzọ na bọtịnụ na ihuenyo ahụ, echiche dị nnọọ mma n'uche m.
N'akụkụ aka ekpe anyị na-achọta oghere iji tinye kaadị nanoSIM abụọ, ma ọ bụ kaadi nanoSIM na kaadi micro SD nke na-enye gị ohere ịgbasa ikike nke ọnụ. Usoro na-ejiwanye arụ ọrụ nke ghọrọ ihe nlele maka Huawei. Nhọrọ amamihe.
N'ịga n'akụkụ aka ekpe, ọ bụ ebe igodo njikwa olu dị na mgbakwunye na bọtịnụ ike nke Huawei Mate 9. bọtịnụ abụọ ahụ ha na-enye mmetụ dị ezigbo ụtọ, na njirimara njirimara ahụ na bọtịnụ ike iji mee ka ọ dị iche na igodo njikwa olu, na mgbakwunye na ịnwe ọrịa strok zuru oke na karịa nrụgide nrụgide zuru oke. Onwe m, ejiri m ka ịnwe bọtịnụ atọ ahụ n'otu akụkụ, yabụ enweghị m nsogbu na nke a, ọ dị mfe iji ya mee ihe.
N'adịghị ka Huawei P9, ọhụrụ phablet emeputa ihe na-egosipụta mkpuchi isi okwu n'elu, na mgbakwunye na ọdụ ụgbọ mmiri infrared nke ga-enyere anyị aka ịchịkwa ngwaọrụ dị iche iche site na ekwentị. Banyere ala, anyị ga-ahụ grilles abụọ maka mmepụta okwu na njikọ USB C.
Azụ nke Huawei Mate 9 na-enye atụmatụ mara mma ma dị ịrịba ama na ọnụnọ nke igwefoto abuo ya na uzo ya abuo flash na ihe mkpịsị aka mkpịsị aka, gbakwunye aha akara ala.
Un ọmarịcha ekwentị nke na-akwado ahịrị usoro a hụrụ na ụdị ndị gara aga na nke ahụ pụtara ìhè ma e jiri ya tụnyere ndị na-asọmpi ya na-ekele akụkụ azụ ahụ na nhazi igwefoto igwe abụọ na-achọsi ike, dịka ị ga-ahụ mgbe e mesịrị, na-enye arụmọrụ dị egwu.
Enwere m ike ịhụ gị ma? ee eziokwu ahụ Huawei Mate 9 anaghị eguzogide uzuzu na mmiri. Echere m na naanị ihe na-efu na njedebe nke onye nrụpụta Eshia bụ asambodo IP kwekọrọ na-enye gị ohere ịmịnye ekwentị gị na-enweghị nsogbu. Olileanya na ọgbọ ọzọ ga-enwe nchebe a.
Njirimara teknụzụ nke Huawei Mate 9
Nlereanya agbarịta 9
Usoro njikwa Android 7 Nougat n'okpuru akwa oyi akwa EMUI 5.0
Ihuenyo 5'9 "IPS nwere teknụzụ 2.5D na mkpebi HD 1920 1080 zuru ezu ruru 373 dpi
Nhazi HiSilicon Kirin 960 isi asatọ (Cortex-A 73 isi na 2.4 GHz na isi anọ Cortex-A53 na 1.8 GHz)
Igwefoto na-aga n'ihu Dual 20 MPX + 12 MPX system with 2.2 focal aperture / autofocus / Optical image stabilization / nchọpụta ihu / panorama / HDR / dual-tone LED flash / Geolocation / Video ndekọ na 4K mma
Igwefoto ihu 8 MPX nwere oghere hiwere isi 1.9 / vidiyo na 1080p
Batrị 4000 mAh na-enweghị ike iwepu ya
Akụkụ X x 156.9 78.9 7.9 mm
Ahịa 699 euro
Dị ka a tụrụ anya na otu ìgwè nke njirimara ndị a, Huawei Mate 9 nwere nhazi ngwaike nke siri ike. Huawei na-aga n'ihu ịkụ nzọ na ngwọta nke ya iji nye ndụ ya na mma agha mbụ ya na nhazi ya HiSilicon Kirin 960 eỌ bụ SoC kachasị ike nke ụlọ ọrụ siri ike taa.
Ana m ekwu maka octa isi CPU mebere cores anọ Cortex A73 nke rutere elekere elekere nke 2.4 GHz, na mgbakwunye na isi anọ ndị ọzọ Cortes A53 na 1.8 GHz. Na nke a, anyị ga-agbakwunye i6 onye nkwado nke na-ahụ maka ịchịkwa ihe mmetụta dị iche iche nke ngwaọrụ ahụ, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ kwụsịtụrụ.
Onye nhazi nke nkwa na nke nwere ike dị elu karịa ihe onye ọrụ ọ bụla ga-achọ ya n'akụkụ ahụ ị gaghị echegbu onwe gị. Site na Huawei ha chere na Kirin 960 bụ 15% dị ike karịa 18% karịa arụmọrụ karịa nsụgharị ndị gara aga Na, mgbe m nyochachara ya otu ọnwa, ana m emesi gị obi ike na ọ dị ka nke a: ọnụ na-akpali ihe niile anyị na-ahụ na ihuenyo ya na oke ọsọ, na-enweghị achọpụta ngosipụta lag ma ọ bụ nkwụsị.
Ọ bụrụ na Huawei adịghị nzọ na ndị nhazi site na MediaTek, Qualcomm ma ọ bụ Samsung iji mee ka ọnụ ahịa ya kachasị mma, ọ bụ maka ihe dị mfe: ọ chọghị ha. Onye nrụpụta ahụ jisiri ike nweta ogo n'ihe gbasara imepụta ndị nrụpụta nke enweghị ihe ọ bụla ga-emere ndị na-asọmpi anyaụfụ.
Ma ọ bụrụ na anyị na-echebara na ike a anaghị emerụ obodo kwụụrụ gị ma ọlị nke Huawei Mate 9 na, dịka ị ga-ahụ mgbe e mesịrị, ka bụ otu n'ime ike nke ekwentị nke ga-abụ ezigbo onye na-ere ahịa.
E wezụga nke ahụ Mali G71 MP8 GPU tinyere 4 GB nke RAM enye a leap na àgwà na ndịna-emeputa ngalaba, àjà magburu onwe arụmọrụ na ndị kasị achọ egwuregwu. Na-eburu n'uche ndakọrịta ya na Vulkan, o doro anya na, ọ bụrụ na ịchọrọ inwe egwuregwu kachasị mma, Huawei Mate 9 bụ ezigbo nwa akwukwo. More ma ọ bụrụ na anyị na-elebara anya na ihuenyo 5.9-inch ya.
Igwe ihuenyo zuru ezu nke HD nke na-enwupụta na ìhè ya
Huawei Mate 9 nwere ihuenyo nke emere 5.9-anụ ọhịa IPS panel, tinyere iko 2.5D na-echebe ya pụọ ​​n’okpoda na ọdịda. A na-edozi ihuenyo ahụ nke ọma, na-enye nsụgharị zuru oke na nke doro anya ma na-egbusi agba, ọ bụ ezie na ekele maka ngwanrọ ngwanrọ magburu onwe ya, anyị nwere ike ịhazigharị agba ọkụ na mmasị anyị.
na ikiri akụkụ dị mma ma nchapụta njikwa dị mma. Ọnụ ahụ na-agbanwe nchapụta ihuenyo na ezigbo oge dị ka ọkụ ihu igwe n'ụzọ dị nro, na mgbakwunye inwe ọnọdụ nchedo anya dị mma maka ịgụ ọdịnaya maka ọtụtụ awa na-enweghị ike gwụrụ anya gị.
Ọ bụ eziokwu na ọ ga-amasị m ka Huawei Mate 9 gbagoo panel 2K, echere m nke ahụ emeputa bụ ihe ziri ezi site na ịkụ nzọ na mkpebi dị ala iji nọgide na-enye nnwere onwe dị ịrịba ama n'ezie.
Enweela m ike ịnwale ọnụ na 2K screens na ọdịiche dị na ọkwa ọhụụ anaghị ahụ anya, belụsọ mgbe m gụrụ ọtụtụ ederede, ebe enwere obere ngosi, mana ana m ekwu na ụdị panel a bara uru iji uru nke teknụzụ VR na Ruo mgbe oghere 4K mbụ maka ekwentị mkpanaaka batara, ebe pikselụ ga-emesị kwụsị mgbe ha na-ekpori ndụ ọdịnaya na eziokwu dị adị, echere m na ihuenyo HD zuru ezu karịa ezuru.
Onye na-agụ akara mkpịsị aka kacha mma na ahịa
Ihe mmetụta biometric na ngwaọrụ Huawei kacha mma. Dị mfe dị ka nke ahụ. N'ime ekwentị niile m nwara, enweghị obi abụọ m na-ahọrọ azịza nke onye nrụpụta a. Na ihe banyere Huawei Mate 9 anyị na-ahụ akara mkpisiaka na-arụ ọrụ dị ka amara na-amata akara ukwu anyị n'oge ahụ site n'akụkụ ọ bụla.
Na mbụ onye na - agụ ya ejiri ya na profaịlụ anyị, oge ọ bụla na - eme ka ngwa ngwa dị elu mgbe ọ na-amata mkpịsị aka anyị, ma nke bu eziokwu bu na site na mgbe mbu o jere oru ozugbo na amutaghi m oganihu nani n'ihi na odighi adi nma ime ka ikike ha megharia.
Iji nye gị echiche ahụ, n’ime ọnwa a ọtụtụ oge mgbe m mere ihe ngebichi m na-eji akara mkpisi aka eme ihe na Ọ dabeghị m otu ugboro. Onwe m, enwere m mmasị na ọnọdụ ya na azụ, ọ bụ ezie na m ghọtara na ụfọdụ ndị ọrụ nwere ike ịhọrọ ka etinye ya na ihu iji nwee ike ịmeghe ihuenyo ekwentị mgbe ọ na-adabere na tebụl, mana enwere m ike ịtụtụrụ ya. imeghe ya ma echere m na ọnọdụ ya zuru oke.
EMUI 5.0, ihu igwe dị mma na nke na-adịghị akwụsịlata ahụmịhe onye ọrụ
Don'tdị akwa adịghị amasị m. Pure gam akporo bu ihe kacha mma ma ndi oru gha aghaputa onye obula ma ha choro. Mana ekwuru m na nsụgharị EMUI ndị kachasị ọhụrụ masịrị m na EMUI 5.0 Huawei jisiri ike nweta ọmarịcha ogo na ahụmịhe onye ọrụ.
Iji malite oyi akwa bụ dabere na gam akporo 7.0 Nougat, ihe kachasị ọhụrụ nke sistemụ Google, ihe a ga-enwe ekele. Mgbanwe ndị e jiri ya tụnyere nsụgharị ndị gara aga na-adọrọ mmasị ebe ọ bụ na, dịka ọmụmaatụ, anyị nwere ike ịgbalite drawer ngwa, nhọrọ dị mma maka ndị ọrụ ahụ anaghị eji sistemụ desktọọpụ ha.
Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ngwa na atụmatụ dị iche iche dị na ntanetị ya mere ọ dị mfe na nkasi obi ị nweta mpaghara ọ bụla nke ọnụ. Gosiputa oru ya na otutu ihe na, site n’inwe mmetuta di na bọtịnụ kwekọrọ, anyị ga-enweta sistemụ nke “kaadị” nke anyị ga-eji wee hụ ihe ngwa anyị mepere.
Dị ka ụdị ndị gara aga, Huawei Mate 9 nwere nhọrọ nke jiri njiko mkpịsị aka gị mee mmegharị ahụ dị iche iche iji nweta screenshots ma ọ bụ rụọ ọrụ nkesa ihuenyo arụ ọrụ nke ga-enye anyị ohere iji ngwa abụọ n'otu oge n'otu ihuenyo ahụ.
Chetara keyboard ahụ Swiftkey Ọ na-abịa n'ụkpụrụ dị na ọnụ ya yabụ idekọ Huawei Mate 9 a bụ ezigbo ọ joyụ. E mesiri ike n'ụzọ pụrụ iche na ọnọdụ "ejima ejiri", ihe na-atọ ụtọ nke EMUI 5.0 ma na-enye anyị ohere iji otu ọrụ ahụ, dịka WhatsApp ma ọ bụ Facebook, nwere profaịlụ abụọ. Ọ dị mma maka ndị ahụ nwere nọmba nke onwe ha na nke ọkachamara ma ha achọghị iburu ekwentị abụọ n'otu oge.
Huawei ọhụrụ interface atụmatụ a nwere usoro ọgụgụ isi nke artificial nke ahụ na-amụta site n'iji ngwaọrụ anyị eme ihe, na-emegharị maka mkpa anyị ma na-enye arụmọrụ ka mma.
Algọridim ndị a, nke achọghị njikọ tontanetị iji rụọ ọrụ, gbanwee maka iji anyị kwa ụbọchị ma mee ngwa ị na-eji na-agba ọsọ ọsọ ọsọ. Ọ dị irè? Enweghị m echiche ọ bụla, ebe ọ bụ na ahụbeghị m mmelite na arụmọrụ, mana ebe ọ bụ na arụmọrụ ahụ zuru oke n'oge ọ bụla, enwere m ike iche na atụmatụ a bara uru n'ezie.
Mana ọ bụghị ha niile bụ ozi ọma. Ndị na-emepụta China hụrụ n'anya ịwụnye bloatware na nwute nke Huawei abụghị otu. Facebook, ntinye akwụkwọ ma ọ bụ ndepụta nke egwuregwu etinyegoro na ekwentị yana, ọ bụ ezie na ọtụtụ n'ime ngwa mkpofu ndị a nwere ike ihichapụ, enwere m iwe na ngwa na-abịa na anaghị m arịọ. Ma, ọ bụ ihe anyị na-agba nkịtị, dị mwute ikwu na, ọtụtụ emepụta na ma ọ dịkarịa ala, ọ naghị adọpụ ọmarịcha ahụmịhe njirimara nke EMUI 5.0 na-enye
Batrị: Huawei Mate 9 na-ehichapụkwa ndị na-asọmpi ya site na ịnye arụmọrụ na-enweghị atụ na nnwere onwe
La nnwere onwe ọ bụ otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa mgbe ị na-ahọrọ ọnụ na nnukwu ihuenyo na n'ihe banyere ụzọ Mate ọ bụ otu n'ime ike ya. N'ihe banyere Huawei Mate 9, m ga-ekwu ya emeputawo ihe karịrị.
Nwunye 9 nwere 4.000 mAh batrị nke ahụ na-ewe uru nke nnwere onwe ya. Iji nye gị echiche ahụ, na-enye gị ihe eji eme ihe, yana oge Spotify kwa ụbọchị, na-eme nchọgharị na ịntanetị, na-agụ ozi ịntanetị, na-eji netwọk mmekọrịta na-egwu egwu ma na-egwu egwu maka ọkara elekere, ọnụahịa ahụ diri m ụbọchị abụọ. N'ụbọchị nke abụọ ọ laghachitere n'ụlọ na 20: 00 elekere ụfọdụ, mana arụmọrụ ahụ dị egwu.
Ọ bụrụ na anyị afanyekwa igwefoto gị iji were foto na vidiyo ma ọ bụ kpọọ egwuregwu na-achọsi ike, batrị ahụ ga-agba ọsọ ngwa ngwa, mana m agwala gị na iji ya eme ihe ọ gaghị ekwe omume ka ekwentị daa n'okpuru 40% n'otu ụbọchị.
Na nke a, anyị ga-agbakwunye usoro ngwa ngwa ngwa ngwa nke na-abịa na Huawei Mate 9, na-enye anyị ohere ịnweta 30% nke batrị ahụ na 50 nkeji. Thebọchị mbụ m na-anwale ekwentị ọ were ogologo oge, na-eru 60% na 50 nkeji, mana mgbe e mechara ezigbo ebubo ọ bịara doo anya na Huawei adịghị agha n'okwu a, ọfụma ngwa ngwa adịla ngwa ngwa karịa ka ọ na-ekwu. onye na-emepụta ya, nke juru m anya.
Ma ọ bụ ya M ruru 55% batrị ụgwọ na 30 nkeji Ma, dịka m kwuru na mbụ, site na nnwere onwe ahụ, anyị ji ụbọchị zuru ezu iji ya mee ihe. N’ụzọ a na-atụghị anya ya, ike nke ụgwọ ahụ na-ebelata ka oge na-aga, mana nkeji 30 - 40 mbụ bụ mgbe ụgwọ ahụ na-ewere ọnọdụ ọsọ ọsọ.
Dika ule m si di, ụgwọ zuru ezu na-erughị awa abụọ, dị n’agbata otu awa na nkeji iri abụọ na otu elekere na nkeji iri anọ. Nke ikpeazụ 15% batrị bụ nke na-ewe ogologo oge iji mejupụta, mana m gwala gị na ọsọ ya bụ ihe ijuanya.
Un ngwa nchaji usoro karịrị nke a maara nke ọma Qualcomm Ndenye n'Aka 2.0 ma ọ bụ MediaTek Pump Express nke anyị ji nwalee onye Nomu S20. N'ezie, ị ga-eji chaja na-abịa na ọnụ ya na nke dị ntakịrị karịa chaja nke Huawei na-ebutekarị na ngwaọrụ ya.
Kwuo na Huawei Mate 9 enweghị ikuku wireless, ọ bụ ezie na ọ bụ ihe anyị na-ejikarị na njedebe ndị na-enye ahụ nke ejiri aluminom mee maka ihe m weere dị ka obere ihe ọjọọ.
N’ikpeazụ, achọrọ m ịza ajụjụ banyere ihe masịrị m. Ma nke ahụ bụ Na igbe nke Nwunye 9 na-abịa micro USB na USB Type C nkwụnye ọkụ, Ọ bara ezigbo uru maka mgbe ị gara n'ụlọ mmadụ ma ha enweghị eriri kwekọrọ na ekwentị gị.
Igwefoto nke gosipụtara sistemụ abụọ bụ ụzọ ị ga-esi
Ngalaba igwefoto bụ otu n'ime ihe ndị kachasị ama na Huawei Mate 9. ọhụụ iji gaa n'ihu ịkụ nzọ na a sọrọ lens usoro na-eme ka ebumnuche nke onye nrụpụta siri ike iji mechie njikọta ya Leica. Ihe si na ya pụta dị ezigbo mma.
Iji malite, Mate 9 nwere ihe mmetụta izizi nwere mkpebi nke 20 megapixels na oghere hiwere isi f 2.2 na-anakọta ozi monochrome (na oji na ọcha). N'aka nke ọzọ, anyị na-ahụ ihe mmetụta 12 megapixel nke abụọ nke nwere otu oghere hiwere isi na nke na-ese foto agba.
Anya m abụọ bụ ihe nlereanya Nchịkọta Leica - H 1: 2.2 / 27 na anyị ahụlarị na Huawei P9 na P9 Plus. Nsonaazụ nke nchikota a na-eme ka onyonyo weghaara na agba ma ọ bụ oji na ọcha rue 20pipixels. Ihe a di na nhazi ihe onyonyo dika Mate 9 na-ewere onyonyo ndi ejidere na agba na onodu monochrome iji dochie agba ndi meputara onyonyo 20 megapixel.
Special mesiri ike na ịrịba mmetụta bokeh nke a na-enweta na Huawei Mate 9 na nke a na-arụ ọrụ site na ntinye oghere dị na ngwa igwefoto ekwentị. Foto ndị e jidere na ọnọdụ a bụ ihe ijuanya ebe ọ bụ na, ozugbo ejiri ya, anyị nwere ike ịdị iche omimi nke ebe foto ahụ dị na ngwanrọ nhazi ya dị ike.
Na software na-enyere a otutu na nke a. Ngwa igwefoto Huawei Mate 9 nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke nzacha na ụdịdị nke ahụ ga-atọ ndị hụrụ foto ụtọ. Karịsịa usoro monochrome maka ịde foto ojii na oji. Anyị enweghị ike ichefu ọnọdụ ndị ọkachamara ga - enyere gị aka iji aka gị gbanwee igwefoto dị iche iche, dị ka ilekwasị anya ma ọ bụ nguzo ọcha, bụrụ ihe dị mkpa maka ndị ọkachamara n'ọhịa nke foto. Ee, jide n'aka na ị ga-emeli ya chekwaa onyonyo n'ụdị RAW.
Mee ka ọ pụta ìhè na Nchikota nke ihe mmetụta abuo na-enye ohere ịmepụta mbugharị ngwakọ 2x na dijitalụ nke na-enye arụmọrụ dị mma, na-enweghị iru ọkwa mbugharị ma nke ahụ, ana m ekwe gị nkwa, ga-azọpụta gị karịa otu nsogbu.
Ikwu ya ọsọ ọsọ nke igwefoto Mate 9 dị ezigbo mma, awade nnọọ ngwa ngwa na àgwà captures. Emechaa m ga ahapuru gi otutu eserese were ekwentị were mee ka ihu ihe omume ya.
na agba dị ezigbo nkọ ma doo anya, karịsịa na gburugburu ya na ezigbo ọkụ, ọ bụ ezie na omume ya na abalị foto juru m anya. Achọrọ m imesi ike na njide ejiri kamera Mate 9 mee na-enye eziokwu na ụzọ ikwesị ntụkwasị obi.
Kedu ihe nke a pụtara? Na anyị agaghị ahụ ihe oyiyi dị ka agba dị ka ekwentị ndị ọzọ dị elu nke nwere HDR rụọ ọrụ nke kacha mma iji nye agba agba. Onwe m ka nhọrọ a na-amasị m karị, ma ọ bụrụ na m chọrọ ịgwọ ihe oyiyi ahụ, m ga-eji ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke nzacha dịnụ iji nye mmetụ dị egwu na njide ndị emere.
M ka na-eche na igwefoto dị na Samsung Galaxy S7 na S7 Edge, ma ọ bụ nnukwu igwefoto na LG G5, ka bụ ọkwa dị elu, mana njide ndị e nwetara na Huawei Mate 9 dị oke egwu ma n'oge na-adịghị anya onye nrụpụta ahụ ga - ejide ndị na - asọmpi ya, ma ọ bụ ọbụna karịa ha. Na eziokwu nke inwe ike igwu egwu na mmetụta bokeh na-enye ya isi ihe na-adọrọ mmasị. Ghara ikwu eziokwu na anyị ga-emesị nwee ike idekọ na 4K format na 30 okpokolo agba kwa abụọ.
La n'ihu igwefoto, na a Baịbụl hiwere isi n'ebe aperture nke f / 1.9 Ọ nwere ezigbo arụmọrụ, na-eme omume nke ọma ma na-enye ọmarịcha njide ekele ya na oghere 8 megapixel, na-aghọ ndị enyi na-adịghị agha agha maka ndị hụrụ selfies.
Osisi foto nke ejiri igwefoto Huawei Mate 9
Huawei Ọ ghọọla onye nrụpụta ọrụ atọ kachasị elu n’ụwa niile n’onwe ya. Onye okomoko nke Asia jisiri ike wepu onyonyo a nke "akara ugwo ahia nke China" ka o bilie dika akara aka na ngalaba nke na-enye ihe nchoputa nke enweghi ihe inwere anya ukwu nye Samsung ma obu Apple.
Anọrọla ya Huawei P8 Lite, Tinyere nnukwu mkpọsa mgbasa ozi, onye nrụpụta nyere ndụmọdụ maka ebumnuche ya. Na mgbe Huawei P9 kacha ere ahịa, nke gafere nde 9 karịa, Huawei kụrụ aka na tebụl iji chetara gị na ọ dị ebe a iji nọrọ.
Tupu m kwuo okwu na nke a Huawei Mate 9 bụ ekwentị kachasị mma nke Huawei mere n'oge gara aga ma arụ ọrụ a na-atọ ụtọ. Ngwaọrụ nwere ezigbo ego gwụchara, yana atụmatụ ndị na-eto ya na mpaghara ahụ, na-enye ọmarịcha arụmọrụ yana njirimara, dịka igwefoto ya abụọ ma ọ bụ nnwere onwe nke mere ka ọ dị iche na ndị na-asọmpi ya. ọnụahịa nke euro 9, nke, na-eburu n'uche njirimara ya, ọ dị m ka ọ dabara adaba.
Enwere eze ọhụụ na ahịa phablet mgbe ọdịda nke Galaxy Note 7. Amaghị m ma ọ bụrụ na ezinụlọ Note ga-alaghachi n'ahịa ahụ, enwere m olile anya na ejiri m n'aka na onye nrụpụta Korea agaghị ada ngwa ngwa, mana o nwere nnukwu ike, n'ihi na ọ bụrụ na Huawei Mate 9 a O meela ka uto dị ụtọ n'ọnụ m, ejiri m n'aka na nke a bụ mbido nke agha na-adọrọ mmasị ka onye nwe ụlọ ahịa phablet ga-enweta okpueze nke ga-erite uru dị ukwuu na onye ọrụ njedebe.
64GB ike ịgbasa
Nnwere onwe a na-enwetụbeghị ụdị ya
Ezigbo ego bara uru maka ego na-atụle uru ya
Enweghị FM Radio
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei » Huawei Mate 9, nke a bụ eze ọhụrụ nke ahịa phablet
SwiftKey na-etinye isiokwu niile akwụ ụgwọ n'efu
Nokia D1C ga-abata n’afọ na-abịanụ na ụdị abụọ